Ụlọ ọrụ ụmụaka, ndị na-ebunye moto - Ndị na-emepụta moto ụmụaka China
Ụmụaka ọkụ eletrik/na-agba n'ihe egwuregwu ụmụaka/ihe ụmụaka ji egwuri egwu batrị
batrị 6V4.54A X 2 pcs
moto 380 x 2 pcs
Nha Ctn: 116*38*67.5 cm
Ogo ụgbọ ala: 134*60*75 cm
40HQ contianer: 225 pcs
Ụmụaka Electric ọgba tum tum/Batrị ọgba tum tum/ Na-eji ihe ụmụaka egwuri egwu
6.4V batrị X 2 pcs
380 moto X 2 pcs
Nha Ctn: 85*39*39.5cm
Ogo ụgbọ ala: 92*46*61cm
Ìhè mara mma, mmụta mbụ
Ụgbọ ala ụmụaka/Motocycle Batrị/ Na-agba n'elu ihe ụmụaka ji egwuri egwu/
Nhazi nwere ụkwụ abụọ na-agbakwunye nkwụsi ike na okirikiri a. Igwe ikuku, ihe mgbakwasị ụkwụ na ụda injin na-eme ka ọ dị ka ọ dị adị. Nke ga-emepụtare ụmụ gị njem na-agaghị echefu echefu oge ọ bụla!
Batrị 6V7A, moto 380 X 2. Otu igodo mmalite, Ngosipụta ike, mmụta mmalite, ọkụ ọkụ, USB, MP3,
XX-3288, ụmụaka eletrik na-eji igwe oti mkpu
Ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi agbakwunyere na-enye gị ike ịtụgharị nke a ka ọ bụrụ sistemụ ọdịyo nwere ikike bluetooth. Were oriọna mkpu n'azụ bịa, anyị kwenyere na nwa gị ga-anụ ụtọ ụbọchị ya dị ka sheriff.
XX-9166, 12V batrị eletrik ụmụaka na-agba ọgba tum tum
Igwe ọgba tum tum a nwere ihe owuwu rọba na-adịgide adịgide, batrị enwere ike ịchaji yana ọsọ 3km / h iji mee ụmụaka obi ụtọ ruo ọtụtụ awa. Ụmụaka ga-eji ihe ngosi mara mma, ọkụ ihu na-arụ ọrụ na egwu na-amasị ha jiri ịnya ụgbọ ịnyịnya.
XX-8105, ọgba tum tum ụmụaka eletrik ọhụrụ
Moto ọgba tum tum ọhụrụ maka ụmụaka ga-anya
$40.98 - $44.31 / Iberibe
Nha katọn: 90*40*54cm
Nha ngwaahịa: 111*55*66cm
Afọ dabara adaba: 3-8 afọ Agba: Red/White/Orange
XX-7188, igwe eletriki batrị maka ụmụaka
Nhazi nke nwere ụkwụ atọ na ụkwụ abụọ nwere wiil ọzụzụ, ọgba tum tum a ga-abụ onyinye zuru oke maka nwa gị. Ịgba ịnyịnya ahụ dị mma dị ka ọ na-ele anya na ịdị mma ụlọ apụwo n'ụwa a.
XX-1200, ihe egwuregwu ụmụaka na-eji ọkụ eletrik na-atọ ụtọ
Ihe egwuregwu ụmụaka na-emekọrịta ihe na-atọ ụtọ nke ga-eme ka nwa gị na ndị enyi ha nwee anụrị. Ezigbo maka afọ 4-10 na oke ibu nke 60kgs.
XX-6699, ọgba tum tum maka ụmụaka na-agba ọsọ na ọgba tum tum eletriki
Igwe ọgba tum tum a nwere nhazi wheelbase siri ike yana ọ na-atọkwa ụtọ ịnya. Gosipụta ihe okike nwa gị wee mepụta ihe ncheta maka ndụ gị niile!
Ụgbọ ala XX-1000/Plastik ụmụaka ji akwọ ụgbọ ala batrị nwa
2020 Model ọhụrụ ụmụaka 12v Car Plastic Toy Cars Maka ụmụaka iji kwọọ ọgba tum tum batrị ụmụaka
$39.20 – $42.70 / Iberibe
Nha katọn: 100.5*31*54cm
Ogo ngwaahịa: 104*50.5*64.5cm
XX-1600, 6V ụmụaka eletrik na-agba ọgba tum tum
Ike na ihe egwuregwu ụmụaka site na ịpị bọtịnụ mgbanyụ ma ọ bụ gbanyụọ, imewe nwere ụkwụ atọ na-akwado nguzozi, ụda injin n'ezie ga-eme ka obere nwa gị na-agba ọsọ na-atọ ụtọ.
XX-1688, 12V dị mfe ịnya ọgba tum tum ụmụaka
Nhazi nke nwere ụkwụ atọ na-agbakwunye nkwụsi ike na okirikiri a. Igwe ikuku, ihe mgbakwasị ụkwụ na ụda injin na-eme ka ọ dị ka ọ dị adị. Nke ga-emepụtare ụmụ gị njem na-agaghị echefu echefu oge ọ bụla!